Baarlamaanka Dowlada federaalka ee soomaliya ayaa gaadhay go'aan khaldan oo lagu dag dagay uu ku saabsan Heshiiskii Dekada Berbera ee dhex maray Somaliland, Shirkada DP World ee laga leeyahay wadanka Imaaraadka Carabta iyo Ethiopia, waxay dowlada Somaliya xoog aan loo baahnayn saaraysaa ama isku dayaysaa inay hor istaagto mashruuc faa'iido badan u lah dowlada dariska iyo walaalaha ay yihiin ee Somaliland.
Sida dadka caqliga u saaxiibka ah ay la socdaan, mashruucan waa mashruuc dhaqaale oo wax tar wayn u lahaan doona Shacabka Somaliland, iyo Somaliya ha ahaadaan kuwa dagan Somaliya, kuwa dagan kilinka shanaad (Ethiopia), Jamhuuriyada Jabouti iyo dhaman gobolka geeska Africa.
Dowlada Somaliaya waxaa hor yaala mashruucyo muhiim ah oo ay ka mid yihiin inay amaanka sugto, waxbarashada umada hormariso, ay isku daydo inay daboosho baahaida caafimaad ee shacabka, abuurto ilo dhaqaale iyo kuwa la midka ah, ee ma aha anay wakhti ku lumiso arimo ayna wax badan ka qaban karin. Mida kale, dacwadan ay Somaliya caalamaka u dirsatay, wax badan ma soo kordhinayso, sababtuna waxaa weeye, mashruuca dekada barbara waa mashruuc dhaqaale oo heshiis sax ah ku salaysan, geeska africana maanta wuu u baahan yahay inuu ilo dhaqaale iyo shaqo abuur sameeyo, sidaa daraadeed, ma jirto cid hor istaagysa heshiiskan, sida aan ognahay Ururka Jaamacada carabta way ka gaabsadeen dhex dhexaadiskii laga codsaday, waxayna ku taliyeen in Somaliland iyo Somaliya ay khilaafkooda si hoos ah u dhamaystaan, taas oo micnaheedu yahay arintu ma ah arin u baahan in wakhti lagu lumiyo, waana mida keentay in baarlamaanka Somaliy uu yidhi waan ka mamnuucnay Dp World gudaha soomaliya, ka dib markii ay ogaadeen in wax dhexgalaya ayna jirin
Somaaliya waxaa ku yaala Dekado badan oo hada aan shaqaynin, ama aan sidii loo baahnaa wax u soo saarin, maalgalin la'aan iyo arimo amaanka la xidhiidha owgood, waxaa dekadahaas ka mid ah Dekada ku taala Magaalada Merka ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Qoraalkan waxaan ku soo koobayaa, Somaaliya waa inay xooga saartaa inay abuurto ilo dhaqaale iyo wax soo saar badan, ma aha inay hor istaagto mashruuc gobolaka geeska africa wax ku soo kordhinaya, Dowlada soomaliya waa in ay xooga saarto arimaha amaanka ee gobolka shabeelaha hoose, oo ah gobolka ugu khayraadka badan Somaliya.
Khalid Siraad Mohamed (khalidyare)